« Hiadana sy ho finaritra, e sambatra tokoa izahay ». Iza moa ireo nilaza azy ho nahita tsy rariny nihatra teto ? Na olom-pirenena tsotra na mpitondra firenena na sehatra iraisam-pirenena dia samy efa nahenoana fanambarana fanamelohana ireo zava-droa loha voalaza teo aloha ireo avokoa. Vao tamin’iny herinandro lasa iny no nanambara indray izao ry zareo mpanao gazety mikambana eo anivon’ny Reporter Sans Frontière na ny RSF fa manameloka ny fanakatonana ny onjam-peo iray any Ilakaka any. Nilaza ihany koa ny avy eo anivon’ny Holafitry ny mpanao eto Madagasikara fa tsy mety io manakatokatona onjam-peo io. Nitranga ny zera baomba tetsy Mahamasina tamin’ny fankalazana ny fetim-pirenena farany teo dia nanameloka ireo tsy natahotody izay mbola tsy fantatra hatramin’izao ny avy eo anivon’ny mpitondra fanjakana. Toy izany ihany koa no zava-nisy tamin’ny raharaha Beroroha izay nahafatesana mpandeha taksiborosy maherin’ny 17. Ireo fanonganam-panjakana nifanesy izay efa zary mitady ho lamaody moa tsy lazaina intsony fa dia mitady ho lamaody tahaka azy koa ankehitriny ity fanamelohana lava tsy misy tohiny ity.